Ny filohan'ny SKAL Bangkok dia miresaka fahasambarana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny filohan'ny SKAL Bangkok dia miresaka fahasambarana
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Travel Wire News
Ny departemantan'ny fandraisana vahiny sy ny fitantanana fizahantany ao amin'ny Oniversite Assump dia nikarakara andian-dahatsoratra mpandahateny manokana hankalazana ny andro iraisampirenena fahasambarana
Ny departemantan'ny fandraisana vahiny sy ny fitantanana fizahantany ao amin'ny Oniversite Assump dia nanamarika ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fahasambarana an'ny Firenena Mikambana tamin'ny alàlan'ny lahatenin'ny mpandahateny manokana, 20 martsa 2019 tao amin'ny campus Assvarnabhumi ao amin'ny Assump University. Nisy ny fifanakalozan-kevitra mivantana natao, nifantoka tamin'ny fahasambaran'ny firenena lehibe an'i Bhutan, notarihin'ny filohan'ny Skal ao Bangkok Andrew Wood sy ny Alumni ao amin'ny Assuming University ary i Skalleague Pichai Visutriratana. Mpianatra Bhutanese mianatra ao amin'ny Oniversite Assump no nizara ny eritreriny momba ny fampandrosoana maharitra ny fizahantany ao amin'ny fanjakan'i Bhutan.
Ny mpianatra dia nanao ny hetsika momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny Dr Scott Michael Smith avy ao amin'ny Departemantan'ny fandraisana vahiny sy ny fitantanana fizahan-tany ary ny talen'ny Young Skal ao amin'ny Skal Bangkok. Ny "Andro iraisampirenena fahasambarana" dia manaiky ny fahasambarana ho tanjon'ny zanak'olombelona ary miantso ny governemanta sy ny maso ivoho miaraka aminy mba hanao politika hanatsarana ny fiainam-bahoaka ankapobeny. Niaiky ihany koa ny ONU fa ny fiadanan-karena ara-tsosialy, tontolo iainana ary toekarena dia ilaina amin'ny fahasambarana manerantany.
Mpianatra Bhutaney Andriamatoa Thrizong Dawa Gyaltshen no nanolotra tantara iray momba ny fahasambarana an-trano any Bhutan. Any Bhutan, dia mikajiana ny GNH amin'ny alàlan'ny tondro toy ny fampandrosoana maharitra, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny governemanta mahomby, ny fitsarana ara-tsosialy ary ny fitehirizana ny fomban-drazana. Mpampianatra mpianatra, Ramatoa Anna Purna Sharwma, mizara ny maha-zava-dehibe ny 'fahatsiarovan-tena' ho lakilen'ny fahasambarana ary manome sosokevitra ny fisaintsainana ho ampahany manan-danja amin'ny fanaony andavanandro.